Abavelisi beemveliso kunye noMveliso-abavelisi beTshayina baseChina-Icandelo 4
Uhlobo lwe-c catheter IV
Iimodeli: Chwetheza Y-01, Chwetheza Y-03
Iinkcukacha: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G kunye 26G
Ngqo catheter IV
I-Catheter ye-IV isetyenziswa ikakhulu ekufakweni kwenkqubo yemithambo yegazi eklinikhi yokunyanzeliswa okuphindaphindiweyo / utofelo-gazi, isondlo sabazali, ukonga ngokungxamisekileyo, njl. Njl. I-catheter ye-IV inxibelelana ngokungafunekiyo nesigulana. Inokugcinwa iiyure ezingama-72 kwaye inonxibelelwano lwexesha elide.
Iimaski zobuso zonyango ezilahlwayo zenziwe ngamanqanaba amabini elaphu elingalukanga elinxibe ngokuphefumla, elilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Izinto zobuso ezilahlwayo zobuso:
Ukumelana nokuphefumla okuphantsi, ukucoca umoya ngokufanelekileyo
Songa ukwenza indawo yokuphefumla emacaleni amathathu engama-360 degree
Uyilo olulodwa lwabantu abadala
Imaski yobuso bezonyango yokusetyenziswa okukodwa (ubukhulu obuncinci)
Uyilo olukhethekileyo loMntwana
Isigqumathelo esenziwe ngonyango sokusetyenziswa ngokukodwa
Iimaski zoqhaqho lwezonyango zinokuthintela amasuntswana amakhulu kuneemicron ezi-4 ububanzi. Iziphumo zovavanyo kwiLabhoratri yokuValwa kweMaski kwisimo sesibhedlele zibonisa ukuba izinga lokuhanjiswa kwemaski yotyando yi-18.3% yamasuntswana amancinci kune-0.3 microns ngokwemigangatho yonyango ngokubanzi.
Iimpawu zemaski zonyango:
Microfiltration meltblown ilaphu umaleko: ukuxhathisa iintsholongwane uthuli umungu emoyeni amachiza abangela umsi kunye nenkungu
Umaleko wolusu ongalukanga: ukufakwa kokufuma
Umaleko welaphu elithambileyo elingalukanga: ukumelana kwamanzi okungafaniyo
Iphedi yotywala yimveliso esebenzayo, ubume bayo buqukethe i-70% -75% isopropyl alcohol, nefuthe lokucoca inzalo.
Isibulala-ntsholongwane esinomthamo obanzi wenzalo, ukungasebenzi kwendima yentsholongwane
Le yitomizer yasekhaya encinci enobungakanani be-compact kunye nobunzima bokukhanya.
1.kuba abantu abadala okanye abantwana abanokuzikhusela kwizifo kwaye bachaphazeleka kwizifo zokuphefumla ezibangelwa kukungcoliseka komoya
2.Akunyanzelekanga ukuba uye esibhedlele, yisebenzise ngqo ekhaya.
3.Convenient ukuyenza, inokusetyenziswa nangaliphi na ixesha
Le mveliso isetyenziselwa iinkqubo zokonga unyango lwe-hemodialysis. ubukhulu becala yenziwe ngetreyi yeplastikhi, itawuli engenazinto ezilukhuni swabs.
Ukunciphisa umthwalo wabasebenzi bezonyango kunye nokuphucula ukusebenza ngokufanelekileyo kwabasebenzi bezonyango.
Izixhobo ezikhethiweyo ezikumgangatho ophezulu, iimodeli ezininzi kunye noqwalaselo oluguquguqukayo ngokweendlela zokusetyenziswa kweklinikhi.
Iimodeli kunye nokubalulwa: Uhlobo A (olusisiseko), Uhlobo B (olunikezelweyo), Uhlobo C (olunikezelweyo), Uhlobo D (imisebenzi emininzi), Uhlobo E (ikhithi yecatheter)
Ipakethe ye-catheter ephambili
Iimodeli kunye nokubalulwa:
Uhlobo oluqhelekileyo, uhlobo lokhuseleko, iphiko elizinzileyo, iphiko elishukumayo
I-Hemodialysis powder (edityaniswe kumatshini)
<< <Ngaphambili 12345 Okulandelayo> >> Iphepha 4/5